गत भदौमा मुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएर आएका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) भुवनेश्वर शाहले ६ महिनाको अवधिमै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायमका लागि उल्लेख्य काम गरिसकेका छन् ।
कसैको दबाबमा परेर काम गर्ने ब्यक्ति आफू नभएको बताउने हक्की श्वभावका डिएसपी शाहले विशेषत मुगुलाई लागूऔषध मुक्त जिल्ला बनाउनका लागि लागिपरेका छन् । उनै साहसँग संसारन्युजका मुगु संवाददाताले गरेको कुराकानीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मुगुको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
म गत भदौं १२ गते दैलेखबाट मुगु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए । मेरो काम यस जिल्लामा भरपर्दो शान्ति सुरक्षा अमनचय र सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउँनु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी भएपनि यो मुगु जिल्लालाई लागू औषधमुक्त जिल्ला बनाउने मेरो प्रमुख उद्धेश्य छ । यो कार्यमा म लगायत मेरा प्रहरी जवानहरु अहोरात खटिएका छन् । लागू औषध कारोबारमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रहरी निकै सफल भएको छ । गत बर्ष लागूऔषधको बिषयमा १ जना मात्र पक्राउ परि मुद्दा दर्ता भएको थियो भने, म सरुवा भई यहा आएदेखि लागू औषध कारोबारमा संलग्न १३ जनालाई पक्राउ गरि सकिएको छ । सोही बिषयमा १० वटा मुद्दा समेत दर्ता गरि कारबाही अघि बढाइएको छ ।
लागू औषधि जिल्लामा कसरी भित्रदो रहेछ अनि यसमा संलग्नहरु कस्ता प्रकारका पाउनुभएको छ ?
यो जिल्लामा ब्राउन सुगर, गाजा चरेश जस्ता लागू औषध फेला परेका छन् । यो नेपालगञ्जदेखि हवाई मार्ग र सडक मार्गबाट भित्रिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । उक्त लागू औषध करिव २० ग्राम सम्म फेला पारेका छौ । यो शहरदेखि गाउँसम्म पुगिसकेको छ । जस्तै खत्याड गाउँपालिकाबाट पनि लागूऔषध कारोबारमा संलग्न ब्यक्तिलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ । यसमा पढेलेखेका तन्नेरी युवा बढी संलग्न भएको पाइएको छ ।
मगुमा पहिलेदेखि नै लागू औषधको कारोबार हुँदै आएको हो कि, पछिल्लो समय बढी देखिएको हो ?
हैन यो मुगु जिल्लामा पहिलेदेखि नै लागू औषध कारोबारीले गहिरो जरा गाडिसकेको रहेछ । सुरक्षा निकायले गहिरो अप्रेशन गर्न नसकेको हो । कानुनलाई पनि पालन गर्न नसकेको नै हो । अहिले म आएपछि कानुनलाई टेकेर काम गर्न सुरु गरे, अनि लागू औषधमा संलग्न ब्यक्ति धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । प्रत्येक स्कुल स्थानीयतहका वडा गाउँ बस्तीमा लागू औषधविरुद्धको जनचेतना फैलाउदै अप्रेसन थालनी गरेपछि सो कार्यमा लागेका जो कोही ब्यक्ति कानुनी दायराभित्र ल्याउन प्रहरी सफल भएको छ । लागू औषधलाई निर्मुल पार्न प्रहरी लागेको छ ।
रारा बिमानस्थलदेखि जिल्लामा भित्रिने सवारी साधनमा चेकजाँच कडा गरिएको छ । बजार क्षेत्रमा अनुसन्धानको लागि बिशेष सुरक्षा परिचालन गरिएको छ ।
ब्यक्ति पक्राउ गर्दा छुटाइ पाउ भन्ने र मुद्दा दर्ता नगर्न भनेर कत्तिको दवाव आएको पाउनु भएको छ ?
म कसैको दबाबमा परेर काम गर्ने ब्यक्ति पनि होइन । म दबाबलाई समान्य किसिमले लिन्छु । म कानुनलाई टेकेर काम गर्ने मान्छे हुँ । दबाब त आइहाल्छ गल्ती काम गर्ने ठूलो ओहोदाको ब्यक्ति होस् या साना म कसैमा पनि कम्प्रोमाइज गर्दिन, कानुनी कारबाही गरेर छोडछु । पहिले मेरो बारेमा नबुझदा यो भूवनेश्वर शाह कस्तो खालको रहेछ भन्छन पनि मेरो काम देखेपछि खुशी हुन्छन् । कसैसँग म झुक्दैन काम गरेर देखाउने मेरो बानी छ ।
५ तपाई यो जिल्लामा आई सकेपछि के-कस्ता काम गर्नु भयो ?
मैले सर्बप्रथम यस जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आन्तरिक सुधार कार्यलाई बिशेष जोड दिए । प्रहरी जवानलाई खुशी बनाएर काम लगाउनु मेरो जिम्मेवारी थियो । प्रहरी जवानलाई बिदाको पनि बिशेष प्राथमिकता दिए । ५ जना प्रहरी जवानलाई कारबाही समेत गरे भने आममाफी दिएर पनि आफ्नो आचरण नसुर्धाने एक जनालाई बर्खात समेत गरे । उत्कृष्ट काम गर्ने १७ जना प्रहरी जवानलाई पुरस्कार पनि दिए यसले गर्दा मेरो सुरक्षा निकायको उच्च मनोबल पनि बढेको छ । ‘राम्रो काम गर पुरस्कार जीत’ भनेर मैले प्रहरी जवानलाई भन्दै आएको छु । कार्यालय ब्यवस्थापन पनि राम्रोसंग अघि बढाएको छु । खेल मैदान शौचालय सुधार कार्यालयको चारै तिर बत्ती जडान जस्ता काम गरिसकेको छु ।
अनि स्थानीयतह संग समन्वय सहकार्यमा केही काम अघि बढाउनु भएको छ कि ?
सामुदायिक प्रहरी र छायानाथ रारा नगरपालिकाबीच समन्वय गरि गमगढी बजार क्षेत्रमा धेरै काम अघि बढाइएको छ । नगरसँग समन्वय गरि ३५ वटा स्टीकलाइट जडान गरिएको छ भने भरपर्दो शान्ति सुरक्षाको लागि ३० वटा सिसि क्यामेरा समेत जडान भइसकेका छन् । रारा घुम्न आउने पर्यटकलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति होस् भन्नका लागि पर्यटक प्रहरीको माग गरिसकेको छु स्वीकृति आउदा बित्तिकै प्रहरीलाई खटाइहाल्छु ।
यो बीचमा समाजिक अभियान सम्बन्धी केही कार्य गर्नु भएको छ ?
आए देखि अहिले सम्म धेरै अभियानका काम भइसकेका छन् छाउप्रथा बारे २८, बालबिबाह सम्बन्धी २८ लैगिंक हिसा सम्बन्धी ३९ कार्य गरि सकेका छौ । औलो रोग, कोरोना भाइरस बारे पनि गाउँ बस्तीमा सचेतना अभियान गरि सकेका छौ । प्रत्येक प्रहरी चौकीमा मोवाइल सिम उपलब्ध गराएर संचारलाई भरपर्दो बनाइएको छ ।
यहाँ आएको छोटो समयमै यतिधेरै काम गरिसक्नु भएको रहेछ, मुल्यांकन कस्तो भएको पाउनु भएको छ ?
म मुगुमा आइसकेपछि माघ २४ गते प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट र फागुन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मेरो कामको मूल्यांकनस्वरुप दुईवटा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । त्यसले अझ बढी हौसला मिलेको छ ।